has written 118 post in this blog.
Comments By Postစိတ်ကူးတည့်ရာ လက်တဲ့စမ်း အာတီဒုံရဲ့ ဃနာနို့ဆွမ်း - padonmar - KZဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တို့တွက် ဗုဒ္ဓနေ့ လက်ဆောင် - padonmar - San Hla Gyiမွေးနေ့ နှင့် ကျမ အမှတ်တရ - Ko chogyi - KZဒါရပ်ကွက်အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ဝင်တဲ့လား? - padonmar - မဟာရာဇာ အံစာတုံးလူဝကြီးနှင့် လူပိန်ကြီး - Ko chogyi - ရွှေ ကြည်ဖတ်ရွေး ရဲ့ CHANGE (Step 1.0) - Foreign Resident - padonmar၄ လရှည်ကြာ ရွာထဲမှာ - မဟာရာဇာ အံစာတုံး - TNAပုညကြိယာဆယ်ပါး - Foreign Resident - မောင် ပေ“၀လုံးရေးဖို့ ညီလေးထိုင်” - nicolus agral - အရီးခင်လတ်နောက်တစ်ခါါါါါါါါါါါါါါါါါါါါါ လာပြန်ပြီဟေ့ - BMTM Mdy - ကထူးဆန်းမန်းဂဇက် ကဗျာချစ်သူများ၏ ကဗျာပြခန်း (ပြခန်းအမှတ် တစ်) - Nay Chi - BMTM Mdy``အဖေမေးတော့ ဖြေခဲ့တယ်´´ - BMTM Mdy - ရာမညခရီးသည်လေးသို့ - မောင် ပေ - မဟာရာဇာ အံစာတုံးစည်တော်ကြီး - မဟာရာဇာ အံစာတုံး - မောင် ပေဘုံဆိုင်အတွင်းမှ မှတ်သားဖွယ်ရာ - cobra - မောင် ပေအယ်ဒီတာ့သင်ပုန်း ( မေ ၂၀၁၃) - မောင် ပေ - pazflorစဉ်းစားကြစေလိုပါတယ် ( ၅၃ ) ( ဆော်ထည့်လိုက်စမ်းပါ ၊ ဘာသာရေး ) - kai - ကြက်အူလှည့်Sakura Tower5ထပ်မှာ ဖွင့်လှစ်ထားရှိတဲ့ J-SAT အမည်၇ ဂျပန်ကုမ္ပဏီ - TNA - ကြက်အူလှည့်East West Dental	PACE	Western Union	Category	Arts & Humanities
Top 10Yin Nyine Nway (77895 Kyats )intro (76971 Kyats )SP (70581 Kyats )naywoonni (67475 Kyats )zaylay (67079 Kyats )weiwei (66922 Kyats )cobra (62187 Kyats )fatty (61354 Kyats )Anzartone (59430 Kyats )MaMa (58031 Kyats )Top Posts & Pagesစဉ်းစားကြစေလိုပါတယ် ( ၅၃ ) ( ဆော်ထည့်လိုက်စမ်းပါ ၊ ဘာသာရေး )